Vokatra amin'ny valin'ny 319 hita
Ny famaritana ny zava-bita ary ny fifohazana amin'ny fampidirana vatana maty
Ny fitsangatsanganana dia mamaritra ny fanahy iray izay maka vatana iray izay nirin'ny fanahy hafa teo aloha. Amin'ny tranga iray dia toa maty ny olona iray raha nisy fanahy hafa nandray ny vatana, izay velona indray. Ny mari-pamantarana ny fitsangatsanganana dia maneho fanahy iray manatona vatana alohan'ny hanombohana izany.
Ian Stevenson, MD momba ny reincarnartion MD izay namono tena tamin'ny andro taloha. Ny mari-pamantarana momba ny fanambadiana virijiny misy famonoan-tena dia X, misolo tena ny tsy fandriam-pahalemana, eo amin'ny sehatra maitso, izay maneho ny fiainana.
Ny porofo fa ny fanahy iray dia afaka manandratra mihoatra ny vatana iray isaky ny mandeha. Ny marika manasaraka ny olona ho nofo dia olona roa avy amin'ny fanahy foibe.
Ny fiovan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny zaza teraka indray ary ny firaisan'ny samy lehilahy
Ny fiovan'ny lahy sy ny vavy dia tsy misy afa-tsy 10 isan-jaton'ny tranga vao teraka, izay afaka manampy antsika hahatakatra ny firaisan'ny samy lahy na ny samy vavy. Ny diagrama momba ny fiovan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny virijiny dia ny fitambaran-tsoratra lahy sy vavy, ary manondro ahy ho lahy sy vavy amin'ny fisarahana.
Famantaram-baovao eo amin'ny sehatry ny zaza teraka amin'ny fanambadiana-fampidirana
Ny ratram-panafody mandritra ny androm-piainana iray dia mety miteraka aretina ao amin'ny toerana iray ihany amin'ny fiainany aorian'izany.
Inona no dikan'ny fiainantsika, ny lasa, ny ankehitriny ary ny hoavy? Ahoana no ahafahan'ny porofo mampiely ny firafitry ny vatana vaovao?
Miaina vatana vaovao indray ve isika? Telepathy miaraka amin'ny biby sy ny sehatry ny fahatsiarovan-tena
Tsikera ny Books ny Soul ny Plan Robert Schwartz sy Levels sy lalàna avy amin'ny tontolon'ny fanahy amin'ny alalan'ny Khorshed Bhavnagari